Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विश्वकपका रोचक पक्ष र जान्नैपर्ने तथ्य – Emountain TV
विश्वकपका रोचक पक्ष र जान्नैपर्ने तथ्य
एजेन्सी, ३० जेठ । विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो उत्सव विश्वकप फुटबल भोलिबाट सुरु हुँदैछ । आमदर्शकसँगै खेल विश्लेषकहरु विश्वकपको इतिहासदेखि वर्तमान केलाउँदै भविष्यसम्मको अड्कलबाजी गरिरहेका छन् ।
सँगै विश्वकपमा विगतका रोचक पक्ष र जान्नैपर्ने तथ्यबारे पनि धेरैले चासो राखेका छन् । हेरौँ, २१ औँ संस्करणसम्म आइपुग्दा विश्वकप फुटबलमा भएका महत्वपूर्ण घट्नाहरु के–के हुन् त ?
-रुसमा हुने प्रतियोगिता फुटबलको यो प्रतियोगिता २१ औं विश्व कप हो । यो पटकको विश्व कपमा कुल ३२ टीम छन् र २०२६ पछि कुल ४८ टीम विश्व कपमा भाग लिनेछन् ।
-आइसल्याण्ड र पनामा पहिलो पटक विश्व कप खेल्दैछन् । स्मरणीय छ, पनामाका राष्ट्रपतिले आफ्नो फुटबल टीम क्वालिफाई भएको खुसीयालीमा ११ अक्टुबरमा राष्ट्रिय विदाको घोषणा गरेका थिए ।
-सन् २०३० देखि हरेक विश्वकप खेल्ने टिम ब्राजिल हो र सबैभन्दा बढी पाँच पटक विश्व कपको उपाधि उचाल्ने पनि ब्राजिल नै हो ।
-सन् १९५८ र १९६२ मा ब्राजीलले र १९३४ र १९३८ मा इटलीले लगातार दुई पटक विश्व कपको उपाधि जितेका थिए ।
-सन् २००६ मा १४, २०१० मा १६ र २०१४ मा १८ गोल गरेको जर्मनी अघिल्ला तीन विश्वकपमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने टोली हो ।
-सन् १९९४ मा क्यामरुनविरुद्ध पाँच गोल गरेका रुसका ओलेग सालेन्को एउटा विश्व कपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन् । अघिल्लो विश्व कप संसारको जनसंख्यामा आधा अर्थात करिब ३ दशमलव २ अर्ब मानिसले हेरेका थिए ।
-एसियाली मुलुकमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी छनौट भएको मुलुक दक्षिण कोरिया हो । उसले १० औं पटक विश्वकप खेल्दैछ ।
-तीन लाख ३४ हजार जनसंख्या रहेको आइसल्याण्ड विश्व कपमा क्वालिफाई हुने सबैभन्दा सानो देश हो । बिना जित धेरैपटक विश्वकप खेलेको नेदरल्याण्डले यो पटकको विश्वकप गुमाएको छ ।
-अहिलेसम्म चारपटक विश्वकप जितेको इटली पनि यसपटक विश्वकप खेल्नेछैन । १९५८ पछि विश्वकपका लागि छनौट नभएको पहिलो टोली पनि इटली नै हो ।
-१९८६ पछि पहिलो पटक अमेरिका पनि यो विश्व कपमा छनौट भएन ।